3 Izinto eziluncedo kwiWebhu zokongeza kwiMozilla Firefox Browser
Isikhangeli sikaMozilla seFirefox sesinye sezikhangeli ezaziwayo kwiwebhu namhlanje, kwaye inamakhulu okongeza afumanekayo ukuphucula amava okukhangela. Nazi izongezo ezintathu zeFirefox eziza kwenza uyilo lwewebhu kunye nophuhliso lube lula, lusebenze ngakumbi, kwaye lube lolonwabo olucacileyo:
Umlilo : IFireShot ikunika izixhobo zokuthatha iifoto ezisemgangathweni zayo nayiphi na iwebhusayithi oyibonayo kwiFirefox. I-FireShot ayikuvumeli kuphela ukuba ubambe naliphi na iphepha lewebhu olibonayo, kodwa ikwanomhleli obanzi ukuze uvule ukubanjwa kwescreen kwaye uyihlele ngokongeza isicatshulwa, imizobo, izichazi, kunye nokunye. Esi sisixhobo esiluncedo kakhulu kumyili kuba ungasisebenzisa ukuthatha izikrini zomsebenzi wakho ukuphuhlisa iphothifoliyo / igalari oza kuyibonisa kwiwebhusayithi yakho; Kananjalo ungathatha iifoto-skrini zeeprojekthi zabaxumi kwaye ungeze izichazi ukuze wabelane nomthengi wakho, njengoko kufuneka.
Umphuhlisi weWebhu : Olu kongezelelo longeza ibar yesixhobo eluncedo kakhulu kwisikhangeli sakho seFirefox, sikunika ukufikelela kwiindidi ezininzi zezixhobo zophuhliso lwewebhu, ezinje ngokubukela kweCSS / HTML kunye nokuhlela, ulwazi lomfanekiso, ubungakanani besikhangeli kwakhona, izixhobo zokuqinisekisa zeCSS / HTML, kunye nokunye.
Umahluko phakathi kwe-zyrtec kunye ne-claritin
Ukujonga zonke izinto ezongezwayo ezikhoyo kwisikhangeli seFirefox, ndwendwela Izongezo zeFirefox .
ungayifaka i-neosporin emntwaneni
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-psyllium fiber
meloxicam ixesha elingakanani lokuqalisa ukusebenza
iintlungu kwicala lasekunene lembambo
imele ntoni i-ssri
xanax neepilisi zokulala